Ciidammo Itoobiyaana oo magangalyo waydiistay dalka Sudan | Berberanews.com
Home WARARKA Ciidammo Itoobiyaana oo magangalyo waydiistay dalka Sudan
Ciidammo Itoobiyaana oo magangalyo waydiistay dalka Sudan
Sudan-(Berberanews)-Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in in ka badan 100 askari oo horey uga tirsanaaa ciidamada nabad ilaalinta Qaramada Midoobey ay dalbadeen in la difaaco iyagoo magangalyo waydiiststay dowladda Sudan.
Waxay qeyb ka ahaayeen howlihii ciidamada nabad ilaalinta Qaramada Midoobey ee Darfur ee dhawaan la soo xiray.
Arrintan ayaa ku soo beegmaysa ka dib markii ciidamo kale oo Itoobiyaan ah oo asal ahaan ka soo jeeda gobolka Tigrey ay diideen in ay Itoobiya dib ugu laabtaan iyaga oo ka cabsi qaba in la dhibaateeyo.
Waxaa sii kordhaya walaaca laga qabo eedeeymaha la xiriira in tacadiyo la geystay 6 bilood ee uu socday dagaalkii gobolka Tigrey.
Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in askar dhan 120 markii ay howlahoodii dhamaadeen badalkii ay ku laaban lahaayeen dalkooda ay magangalyo waydiisteen dalka Sudan.
Arrintan ayaa lala xiriirinaya xiisadaha qowmiyadaha ku saleysan ee dhidibada sii aasanaya ee dalka Itoobiya, taasi oo ka dhalatay dagaalkii gobolka ku yaalla waqooyiga dalkaasi ee Tigrey.
Bishii February ciidamo kale oo asal ahaan ka soo jeeday gobolka Tigrey oo nabad ilaalin u joogay dalka Koonfurta Sudan ayaa sidoo kale diiday in ay dalkooda dib ugu laabtaan iyaga oo ka cabsi qaba in la dhibaateeyo.
Waxaa jiray warbixino badan oo sheegayay in ku tumasho xuquqda aadanaha ah ay dhacday 6-dii bilood ee uu dagalka gobolka Tigrey socday.
Sabtidii madaxa kaniisadda Orthodox ee dalka Itoobiya oo isaga qudhiisa asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda Tigrey ayaa sheegay in tacadiyada ay u dhigmaan xasuuq.
Dowladda Itoobiya ayaa beenisay in ay xasuuq geysatay waxayna sheegtay in ay bartilmaameedsanayaan hogaamiyayaasha TPLF, balse aysan bartilmaameedsan dadka rayidka ah.
Gobolka Tigrey ayaa dagaalka ka dib waxaa ka qaxay kumannaan qof oo intooda badan u qaxay dalka Itoobiya dariska la ah ee Sudan.
Inkastoo bilooyiin ka hor ay dowladda Itoobiya ku dhawaaqday in dagaalka gobolka Tigrey la soo afjaray ayaa hadanaha waxaa gobolka Tigrey qaab jabhadeyn ah uga dagaalama xoogagga TPLF.
Previous article“Waxaynnu ku heshiinnay in Ololuhu noqdo” Madaxweyne Biixi
Next articleSaddex hablo Somali ah oo kusoo baxay doorashada deegaanka Ingiriiska